အချစ်ကျမ်း | PoemsCorner
တစ်ချို့ကအချစ်သည် နှလုံးသား၌တည်သည်၊ တစ်ချို့က အချစ်သည် မျက်စိ၌တည်သည် အစရှိသဖြင့် ဝိဝါဒ ကွဲပြားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အမှန်စင်စစ် အချစ်သည် မည်သည့်နေရာတွင်မှ တည်ရှိခြင်းမရှိပေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အချစ်သည် နေရာတိုင်း၌တည်ရှိနေပေသည်။ ဥဒါဟရုဏ်ပြရလျှင် ကျောက်တုံးနှစ်တုံး၊ လဲမှို့ဖြင့် မီးခတ်သည်ဆိုပါစို့။ မီးသည်ကျောက်တုံး၌ တည်၍ ထွက်လာခြင်းလော၊ လဲမှို့၌တည်၍ ထွက်လာခြင်းလော။ ကျောက်တုံးနှစ်ခု၏ ပွတ်မှုအား၊ လဲမှို့၏ ခြောက်သွေ့ကျွမ်းလောင်လွယ်ခြင်း ဟူသောဂုဏ်သတ္တိကြောင့်သာလျှင် မီးကျွမ်းလောင်ရခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤအခြင်းအရာကို ကြည့်၍အချစ်၏တည်နေရာကို သဘောပေါက်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
အချစ်ကို လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုသာ ခံစားနိုင်သည်မဟုတ်၊ အချို့သတ္တဝါများ၌လည်းအချစ်ရှိကြောင်း စူးစမ်းလေ့လာမှုများမှ သိရှိရလေသည်။ ရေဘဲများမှာ မိမိရွေးချယ်ထားသော အဖော်မှလွဲ၍ အခြားဘဲများနှင့် ပေါင်းဖက်နေထိုင်ခြင်းမရှိပေ၊ ထို့အပြင် ဘဲများ၌ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းပင်ရှိ၍ အခြားအဖော်သစ်နှင့် ရှိခိုက် ကွာရှင်းထားသော အဖော်ဟောင်းနှင့်တွေ့လျှင် ဘဲတို့သဘာဝ နှုတ်ဆက်ခြင်းပင်မရှိပေ။ အလားတူပင် ဟင်္သာငှက်၊ အောက်ချင်းငှက်တို့မှာလည်း အဖော်တစ်ဦးတည်းသာ ပေါင်းဖက်နေထိုင်ခြင်း၊ မိမိအဖော်သေလျှင် လိုက်သေတတ်ခြင်း တို့ကြောင့် အချစ်ကိုခံစားနိုင်သည်ဟု မှတ်ချက်ချရပေမည်။ ဘုရားဟောတရားတော်များ၌ လည်း သိကြားမင်းသည် အသူရာမလေးကို ခိုးယူခြင်း၊ စောင်းနတ်သားသည် မာတလိနတ်သား၏သမီးတော်ကို စုံမက်သော်လည်း နတ်သမီးမှ ပြန်မကြိုက်သောကြောင့် သိကြားမင်းမှ သိကြားအာဏာဖြင့်ပေးစားရခြင်း တိုိ့ကိုရှုလျှင် နတ်ပြည်၌လည်း အချစ်ရှိကြောင်း အထင်အရှားသိနိုင်ပေသည်။ (ဤနေရာတွင်စောင်းနတ်သားအကြောင်း၊ သိကြားမင်းအကြောင်း၊ ငှက်များအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းပြလိုသော်လည်း အချစ်အကြောင်းကိုသာ ပဓာနပြုရေးသားရခြင်းဖြစ်ရာ ဖော်ပြရန် မစွမ်းသာပေ)
အချို့လူများသည် အချစ်ကို နှလုံးသားဖြင့် ခံစားတုံပြန်ကြသည် ဟု အမှတ်မှားနေကြသည်။ သိပ္ပံရှင်များ၏ အလိုအရ ချစ်ခြင်း၊မုန်းခြင်း၊ကြောက်ခြင်း အစရှိသော စိတ်ခံစားမှုမှန်သမျှသည် ဦးနှောက်ဖြင့်သာ ခံစားခြင်းဖြစ်လေသည်။ ဤသည်ကို ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “သို့ဆိုလျှင် ကိုယ်ချစ်တဲ့လူနှင့် တွေ့ရင် ဘာပြုလို့ နှလုံးခုန်မြန်လာသနည်း” ဟု စောဒက တက်ဖူးလေသည်။ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ခြေဖျားလက်ဖျားအေးခြင်း၊ စကားထစ်အခြင်း တို့မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ လက္ခဏာပင် ဖြစ်ကြောင်းပညာဥာဏ်နည်းသော အနှီသူငယ်မသိရှာပေ။
အချစ်၏သင်္ကေတများမှာ ဖဲပြား၊ဇာနှင့် အနားတွန့်လေးများ၊ အသည်းပုံ၊ အချစ်ငှက်နှင့် ခိုပြာလေးများ ဖြစ်သော်လည်း အသည်းပုံသာ လူသိများလေသည်။ လက်ထပ်လက်စွပ်မှာ အချစ်၏သင်္ကေတမဟုတ်ဘဲ စက်ဝိုင်းပုံဖြစ်၍ အဆုံးအစမရှိခြင်း၊ ထာဝရဖြစ်ခြင်း၊ စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း၊ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းဖြစ်ခြင်း၊ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွါးခြင်းနဲ့ စကြာဝဋ္ဌာ၏သင်္ကေတဖြစ်ရာ လက်ထပ်ပွဲ၌ လက်စွပ်လဲခြင်းဖြင့် အဆုံးအစမရှိသောအချစ်များဖြင့် စကြာဝဋ္ဌာတည်သရွှေ့ ထာဝရမပြောင်းလဲပဲ လက်တွဲမယ် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်ပင် ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် အနီရောင် နှင်းဆီတစ်ပွင့်(မင်းတစ်ယောက်တည်းကို အရမ်းချစ်တယ်) ၊အဖြူရောင်နှင်းဆီပွင့်များ (ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်း) စသောအဓိပ္ပါယ်များဖြင့် လည်း ပန်းများဖြင့် သတ်မှတ်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။ အရောင်များ၏ ကိုယ်စားပြုဂုဏ်များအနက် အနီရောင်သည် အချစ်ရေး၌ အောင်မြင်ခြင်း၊ ချစ်မေတ္တာတိုးပွါးခြင်း၊ ကိုယ်အားမာန်တိုးပွါးခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်း၊ ပန်းရောင်သည် ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အချစ်၊ အပြစ်ကင်းသောနေထိုင်မှု၊ ဆွဲဆောင်အားကောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ရာ အထက်ပါအရောင်များကို အချစ်နှင့် ပတ်သက်သော အရောင်များအဖြစ် သတ်မှတ်ရပေမည်။ အခြားအချစ်၏သင်္ကေတမှာ အနမ်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို KISS ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ KEEP IT SHORT AND SIMPLE) ဖြစ်၍ အနမ်6းမျိုးရှိလေသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းသော simple kiss၊ လေထဲကတစ်ဆင့်နမ်းသော fly kiss၊ အမိမြေကိုနမ်းသော earth kiss၊ နှာခေါင်းချင်းပွတ်၊ဖိ ၍ နမ်းသော Eskimo kiss (အက်စကီမိုးလူမျိုး၊ နယူးဇီလန် နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံများ၌ တွေ့ရလေသည်)၊ မျက်စိချင်းကပ်၍ မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ကာ နမ်းသော butterfly kiss၊ မျက်ခုံးမွေးချင်းပွတ်၍ နမ်းသော caterpillar kiss၊ စာရွက်ပေါ်က တစ်ဆင့်နမ်းသော seal with kiss တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
အချစ်နှင့်ပတ်သက်သော စကားပုံများ အဆိုအမိန့်များမှာ
1 Love is likeawar, easy to begin but hard to end.
2 Never break four things in your life- trust, relation, promise and heart. Because when they break, they don’t make noise but painsalot!
3 True love is like the apparition of spirit, everyone speaks of it but few have been seen it.
4 Young men wish love, money and health. One day they say health, money and love.
5 Love if you have it, you don’t need anything else, and if you don’t have it, it doesn’t much matter what else you have.
6 In dreams and in love, there are no impossibilities.
7 Love enters on tiptoe and bangs the door when it leaves.
8 မင်းကိုချစ်တယ်လို့ ပြောတာဟာ ကိုယ့်ကိုချစ်ပါလို့ ပြောတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့
9 အချစ်ဆိုတာ မိုးလေ၀သခန့်မှန်းသလိုပဲ ဘယ်သူမှလိမ်ညာပြီးမပြောဘူး။ ဒါပေမယ့် မှားသွားခဲ့တာလည်း ရှိမယ်။
10 စဉ်းစားတယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်ပဲ။ နှလုံးသားနဲ့မဆိုင်ဘူး။
11 အချစ်ဆိုတာ လူနှစ်ယောက်ကျူးလွန်တဲ့ မိုက်မဲမှုတဲ့။
12 အချစ်ဆိုတာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ပြည့်စုံပေမယ့် အချစ်ရဲ့သင်္ကေတ အနမ်းကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ မပြည့်စုံနိုင်ပါ။
13 Love is never having to say you’re sorry.
14 ချစ်မိပြီဆိုရင် မစဉ်းစားတော့ဘူး။ စဉ်းစားလာပြီဆိုရင် မချစ်တော့လို့။
15 အချစ်ဆိုတာ အချိန်ကိုကုန်ဆုံးစေတတ်ရင် အချိန်ဟာလည်း အချစ်ကို ကုန်ဆုံးစေပါသည်။
16 အချစ်နဲ့ဘာမှ မဟုတ်ခြင်းဟာ သိပ်မကြာခင်ဘာမှမဟုတ်ခြင်းဘဲ ဖြစ်သွားတာပါပဲ။
17 Whenaman is in love or in debt, someone else has the advantage.
18 Nothing but the heart can change the heart.
၄င်းတို့မှာ ထင်ရှားသောစာပေပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၏ အဆို့အမိန့်များဖြစ်သော်လည်း မှန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်မဆိုလို၊ မှားသည်ဟုလည်း မပြောလိုပေ။ စာဖတ်သူများ ဗဟုသုတအလို့ငှာ ကောင်းနိုးရာရာရွေး၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အချစ်ကို ခံစားသောအသက်အရွယ်မှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီကြသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် 14နှစ်နှင့် အထက်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ 14နှစ်မှာ မြန်မာ့အမြင်တွင် ငယ်သေးသည်ဟုထင်သော်ငှားလည်း အနောက်နိုင်ငံများ၌ 14နှစ်ပြည့်လျှင် မွေးနေ့ပွဲ၌ အရွယ်ရောက်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု၍ လွတ်လပ်ခွင့် အချို့ပေးကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအချိန်၌ ချစ်ကြသူအတော်များများမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုသဘာဝ၊ စိတ်ကစားခြင်းနှင့် မိန်းမဆိုလျှင် မိမိအလှကိုထင်ရှားစေလိုသော်ငှာလည်းကောင်း၊ ယောကျာ်းဆိုလျှင် ယောက်ျားပီသခြင်းကို ပြသစေလို၍ သော်လည်းကောင်း အတုချစ်ချစ်ကြသည်မှာ များကြောင်းဝန်ခံရပေမည်။ 18နှစ်သည် အိမ်ထောင်ပြုရန်အကောင်းဆုံးဟု ဆေးပညာရှင်များမှလည်းကောင်း၊ ရှေးကျမ်းဂန်များ၌ လည်းကောင်းအထင်အရှားတွေ့ရပေသည်။
ရည်းစားနှင့်ချစ်သူသည် မတူညီကြကြောင်း ဆက်လက်ဖော်ပြလိုသည်။ ရည်းစားသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အပေါ်သာယာခြင်း နှင့် ကြိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် တွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ချစ်သူသည် ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ နှလုံးသားချင်းစကားပြောပြီး ချစ်သူဟူသောခေါင်းစဉ်အောက်၌ နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပေသည်။ အချစ်ဦးနှင့် ပေါင်းဖက်ရန်ခက်သည် ဟုဆိုကြသည်။ မှန်ပေသည်။ အချစ်ဦး၌ အရာတော်တော်များများသည် အစိမ်းသက်သက်ဖြစ်၍ ဇာတ်မတိုက်ထားသော ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကြည့်ရသလို ကမောက်ကမဖြစ်တတ်လေသည်။ ချစ်သူနှစ်ဦးဘ၀၌ လျော့ချစ်ရန်လိုကြောင်း၊ မကြာမကြာတွေ့ဆုံပေးရန်လိုကြောင်း၊ နမ်းရန်လိုကြောင်း၊ သူကတင်းရင် ကိုယ်ကလျော့အခြေအနေအရ ဆက်ဆံသင့်ကြောင်း စသဖြင့်အထာမသိသဖြင့် ပြသနာများစွာ ဖြစ်လေတော့သည်။ ထိုအခါ အချစ်သည် “အစတစ်ချက်သာ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းပါလား၊ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပါလား”ဟု စာဖတ်တတ်ခါစ ကလေးငယ်ကို ကျမ်းဂန်စာခန့်စာကြီးများအတင်းဖတ်ခိုင်းပါက စာဖတ်ခြင်းကို ကြောက်သွားသကဲ့သို့ ရှိန်သွားတတ်ကြောင်း မှတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများသည် မိမိချစ်သူက မိမိကိုနမ်းသောအခါ အခွင့်အရေးယူသူ၊ နှာဘူးကျသူဟု မှတ်ထင်တတ်၏။ အမှန်စင်စစ် လက်ကိုကိုင်ခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ ပြုံးခြင်း စသောကြင်နာသောအပြုအမူများသည် လွန်စွာလိုအပ်လေသည်။ သုတေသန ပြုချက်များအရ လိင်ဆက်ဆံမှနမ်းကြသော လင်မယားစုံတွဲများသည် မကြာခဏနမ်းလေ့ရှိသော လင်မယားစုံတွဲများထက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု(စိတ်ကျရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ချေများ၍ လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ၌ မအောင်မြင်ကြောင်းသိရှိရသည်။ ရှေးအခါက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည် မွေးကင်းစကလေးအယောက်တစ်ရာကို ခေါ်၍ “ကလေးများကို နို့တိုက်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးသုတ်သင်ခြင်းစသော ကိစ္စများမှလွဲ၍ စကားမပြောရ၊ မချော့မြူရ၊ မနမ်းရ၊ ယုတ်စအဆုံးပြုံးပင်မပြရ” အမိန့်ချမှတ်၍ ကလေးများ ကြီးလာသောအခါ မည့်သည့်စကားပြောမည်ကို စူးစမ်းသည့်သဘောဖြင့် သုတေသနလုပ်လေသည်။ ထိုကလေးအယောက်တစ်ရာ မည်သို့ဖြစ်သွားမည်ဟု သင်ထင်ပါသနည်း။ အားလုံးသေဆုံးသွားကြပါသည်။
ချစ်သူစုံတွဲအားလုံး၏ ပန်းတိုင်ကား လက်ထပ်ခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်။ တစ်ချို့ကား လက်ထပ်ခြင်းကို ဦးနှောက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်၍ တစ်ချို့ကမူ နှလုံးသားဖြင့် ဆုံးဖြတ်တတ်ကြလေသည်။ မိမိတို့ချစ်သူတိုင်းသည် မိမိဘ၀အတွက်သင့်တော်သောလူမဖြစ်နိုင်ပေ။ မိမိချစ်သူသည် မိမိနှင့် type ချင်းတူသော၊ အားကိုးယုံကြည်ထိုက်သော၊ မိမိအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ၀င်ဆံ့သော၊ ကလေးများအတွက် စံပြနမူနာဖြစ်သော လူဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပေမည်။ အချစ်မပါဘဲဘ၀ကို တည်ဆောက်ဖို့ ခဲယဉ်းပါသည်။ သို့သော် အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့လည်း ဘ၀ကို တည်ဆောက်လို့မရပေ။ ချစ်သူဘ၀သည်မိမိတို့နှစ်ဦးတည်းနှင့် သာသက်ဆိုင်သော်လည်း အိမ်ထောင်သည်ဘ၀သည် နှစ်ဖက်အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့်ပါ သက်ဆိုင်ကြောင်းသတိချပ်ရပေမည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းသည် မိန်းမယူခြင်း၊ ယောက်ျားယူခြင်းမဟုတ် အိမ်ထောင်ပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဦးနှောက်ဟူသည် တည်နေရာအရကိုပင် နှလုံးသား၏ အထက်၌သာ ရှိပေသည်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အားလုံးကိုဖြေရှင်းမည်၊ သူ့ကိုပြုပြင်ယူမည်၊ မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပြသနာမရှိပါဘူးဟု အချို့ကစွတ်ငြင်းတတ်လေသည်။ဆိုကြပါစို့။ မိမိချစ်သူသည် ဘာသာခြားဖြစ်နေသည်။ မိမိကလည်းသူ့ကိုပင် ချစ်သည်။ သူမှလွဲ၍ ဘယ်သူ့ကိုမှ လက်မထပ်ချင်၊ မချစ်ချင်ဘူးဟု စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားသည်ဆိုပါစို့။ ယခုရောက်နေသော နေရာမှခဏဖယ်ရှောင် ၍ ဘ၀ကို အပေါ်ကကြည့်ကြည့်ရအောင်။ လက်ထပ်ကြပါပြီတဲ့။ မိမိတို့ရိုးရာအတိုင်း လက်ထပ်မလား၊ သူတို့ဘာသာထုံးစံအတိုင်းလက်ထပ်မလား။ လက်ထပ်ပြီးမိဘများကို ကန်တော့ပါပြီတဲ့။ သူက လက်အုပ်ချီပြီးဒူးထောက်လို့ လက်ဖမိုးနဖူးထိမယ်ထင်ပါသလား။ သားသမီးကျင့်ဝတ်ငါးပါးထဲမှ စောင့်လေမျိုးနွယ်ကို ပြောင်ပြောင်ကြီးလျစ်လျူရူပြီး လက်ထပ်၊သားသမီး ထွန်းကားလာပါပြီတဲ့၊ ဘုရားကျောင်းဂန်အတူသွားလို့ သင့်ပါရဲ့လား။ ရဟန်းပြုပေးပြီး ရဟန်းဒကာ၊ရဟန်းဒကာမ အဖြစ်ခံနိုင်ပါမည်၏လော။ သားကိုရင်လေး၏ ဒကာမကြီး၊ဒကာကြီး ဆိုသောအသံကို အိပ်မက်တောင်မက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အတူ တူနှစ်ကိုယ်တဲအိုပျက်မှာနေ ထမင်းရည်လေးလျှက်ဆိုတာ သီချင်းထဲမှာပဲ နားထောင်ကောင်းလေသည်။ မိမိကကိစ္စမရှိသော်လည်း မိမိရင်နှစ်သည်းချာလေးများ သူများထက် အစားဆင်းရဲ၊ အနေဆင်းရဲ ဖြင့်အောက်ကျနောက်ကျမည်ကို ဘယ်မိခင်မှ မြင်ချင်မည်မဟုတ်ပေ။မိမိရွေးချယ်မှုသည် ယခုမိမိအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ နောက်မိမိ နှင့် မိမိအား မှီတွယ်ပတ်သက်သူများနှင့်ပါ သက်ဆိုင်ကြောင်း သတိချပ်ပါလေ။ ထိုကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများ၌ ချစ်ခွင့်တစ်ခါ၊ လက်ထပ်ခွင့်တစ်ခါ တောင်းရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာမှုနယ်၌မူ ချစ်သူသည်သာ အိမ်ထောင်ဖက်၊ ချစ်သူသည်သာ ဘ၀လက်တွဲဖော်ဟု ခေါက်ရိုးကျိုးနေရာ ပြုပြင်သင့်လေသည်။ ဤသို့ရေးသားရခြင်းမှာ အနောက်နိုင်ငံများကို အထင်ကြီးအားကျခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းမွန်သင့်တော်ပါလျှင် ရန်သူပင်ဖြစ်လင့်ကစား အတုယူရမည် မဟုတ်ပါလော။ ထို့ကြောင့် “အိမ်ထောင်မှု၊ ဘုရားတည်၊ ဆေးမှင်ရည်စုတ်ထိုး ချက်မပိုင်ရင် နောင်ပြင်ဖို့ခက်” ဟု ရှေးပညာရှိများက မိန့်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ချစ်သူများသည် မိမိအဖော်အပေါ် ချစ်သူကျင့်ဝတ်ငါးပါးနှင့်အညီကျင့်ကြံနေထိုင်သင့်သည်။ ချစ်သူကျင့်ဝတ်ငါးပါးမှာ- “သစ္စာမပျက် ချစ်စိတ်မှန်စေ ထားလေတန်ဖိုး မျှဝေဒုက္ခကြင်နာယုယ ၀တ်ငါးဝ ကျင့်လေချစ်သူတာ” ဟုမှတ်ယူကြကုန်လော့။ ဤသည်မှာချစ်သူများ တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးတန်ဖိုးထား ကြင်နာစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆရာနီအဲလင်း ရေးသားချီးမြှင့်ပေးခဲ့သော လင်္ကာဖြစ်သည်။
လူတစ်ဦးသည် တစ်သက်၌ လူတစ်ဦးထက်ပို၍ချစ်နိုင်လေသည်။ သို့သော် တစ်ပြိုင်နက်ထဲမဟုတ်ပေ။ ထို့အတူ နှလုံးသားတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းမဟုတ်ပေ။ အချစ်စစ်အချစ်မှန်၌ နှလုံးသားသည်မပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း သေဆုံးနိုင်ပေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည်လူတစ်ဦးကို ချစ်ပြီးအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် အခြားလူတစ်ဦးကိုချစ်သွားနိုင်ပေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သင်သစ္စာမရှိ၍ အပြောင်းအလဲများ၍ မဟုတ်ပေ။ သင့်ယခင်နှလုံးသားမှာ သေဆုံးသွား၍ဖြစ်သည်။ ယခုသင်ချစ်နေသောသူမှာ နှလုံးသားအသစ်ဖြင့် ချစ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ နှလုံးသားအသစ်မှာ နှလုံးသားဟောင်းမဟုတ်သော်လည်း နှလုံးသားဟောင်းနှင့်ကင်း ပြီး၍လည်း မတည်ရှိနိုင်ပေ။ ဤအကြောင်းအရာများမှာ ခက်ခဲနက်နဲ၍ ဥာဏ်နည်းပါးသူများ နားလည်စေလို့သောငှာ ဥပမာတစ်ခုပေးအံ့။ သင်သည် ဖယောင်းတိုင်တစ်ချောင်းမှမီးကို အခြားဖယောင်းတိုင်တစ်ချောင်းသို့ကူးသည် ဆိုပါစို့။ ဒုဖယောင်းတိုင်၌ ရှိနေသောမီးသည် ပဖယောင်းတိုင်မီးလော။ မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လည်း ဒုမီးသည် ပမီးမရှိဘဲ ဖြစ်တည်နိုင်ပါ၏လော။ မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့ဆိုလျှင် နားလည်လောက်ပါပြီ။
အချစ်ဆိုတာဟာ ပေးဆပ်ခြင်းလား၊ ရယူခြင်းလား ဟူသောမေးခွန်းမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာအမေးခံရသော မေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။ အချို့က အချစ်သည် ပေးဆပ်ခြင်းလည်းမဟုတ်၊ ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းလည်းမဟုတ် ကိုယ့်ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်ပြီးတစ်သက်လုံးပေးဆပ်နေမည့် ပိုင်ဆိုင်ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆို၏။ အမှန်မှာ အချစ်သည် ပေးဆပ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း တို့နှင့်မဆိုင်ပေ။ ၄င်းတို့မှာ ထိုအချစ်ပိုင်ရှင်၏စိတ်နေသဘောထား၊ ခံယူချက်၊ အခြေအနေအကြောင်းအရာပေါ်တွင်မူတည်လေသည်။ အချစ်ကို ဘာဟူ၍လှေနံဓါးထစ်ယူဆ၍ မရပေ။ အချစ်သည် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံဖြင့် ၀င်ရောက်လာနိုင်ပြီး ခေါင်းစဉ်မျိုးစုံအောက်၌ နေထိုင်နိုင် သည်။ အချစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့တွေးထင်ထားတာထက် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလျှို့ဝှက်သလို ကျွန်ုပ်တို့တွေးထင်နိုင်တာထက်လည်း ကျယ်ပြန့်နက်နဲလေသည်။
ချစ်သူချင်း လမ်းခွဲကြသည့်အခါ အများစုက အားနွဲ့သူ၊ စိတ်ဓါတ်ပျော့သူ မိန်းမသားများက ပိုခံစားရမည်ဟု ထင်ကြသည်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ ယောက်ျားလေးများသည် မိန်းကလေးများထက် လမ်းခွဲသောအခါ ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မိန်းကလေးများသည် ချစ်သူထက် မိဘသူငယ်ချင်းများကို ပိုမိုခင်တွယ်ပူးကပ်လေ့ရှိပြီး ယောက်ျားလေးများမှာမူ ချစ်သူကိုသာပိုမိုခင်တွယ်တမ်းတလေ့ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်မျှလောက်ချစ်သည်ပြောပြော လူတစ်ယောက်သည် ချစ်သူကို အချိန်ပြည့်သတိရသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့ရာတွင် စိတ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းများ၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ်စားရသည့်အခါမျိုး၊ တိုက်ဆိုင်မှုလေးများတွေ့သည့်အခါ ချစ်သူကို မဖြစ်မနေသတိရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အချို့လူများသည် ကြိုက်သည်ဟူသော ဝေါဟာရနှင့် ချစ်သည်ဟူသော ဝေါဟာရကို မကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရသည်။ မိမိကြိုက်နေသောသူကို မချစ်သည်မှာဖြစ်နိုင်သလို မိမိချစ်နေသူကို မကြိုက်သည်မှာ လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းတစ်ဦး နှစ်သက်သဘောကျသောမိန်းကလေးပုံစံမှာ ဥာဏ်ပြေး၍ ဆိုးဆိုးဆတ်ဆတ် မဟုတ်မခံ စွာသောပုံစံဖြစ်၍ ထိုပုံစံမိန်းကလေးများမြင်လျှင် နှစ်သက်သဘောကျသော်လည်း ချစ်လို့မရပေ။သူ့ ချစ်သူမှာလည်း ထိုပုံစံမဟုတ်သော်လည်း အချစ်လျော့သည်ဟူ၍ မရှိပါ။
အချို့လူများသည် မိမိကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပါဘဲလျက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ချစ်နေမိသည့် အဖြစ်မျိုးလည်း ရှိနေတတ်သည်။ အလွယ်တကူရနေသောရေကို တန်ဖိုး မထားသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ နီးလွန်းသော အရာများကို မမြင်သကဲ့သို့လည်းကောင်း မိမိကမချစ်ဟုထင်ထားပါလျက် ချစ်နေမိသည်မှာလည်း အနည်းနှင့်အများပင်။ သူမိမိနှင့် ဝေးသွားသောအချိန်၊ စိတ်နှလုံးပြင်းပြစွာလှုပ်ရှားသောအချိန် များ၌ ဤအချက်သည် လယ်ပြင်ဆင်သွားသကဲ့သို့ ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာတော့သည်။
အချစ်တွင် ဗြဟ္မာစိုရ်တရားလေးပါး အနက်သုံးပါးပါဝင်၏။ မေတ္တာ၊ စေတနာ၊ ကရုဏာ ဖြစ်သည်။ ချစ်သူအပေါ်၌ မေတ္တာစိတ်အပြည့်အ၀ရှိမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပင်။ မေတ္တာသည် စူး၏။ အားကြီး၏။ လူတစ်ယောက်သည် သူ့ချစ်သူကို တွေ့သောအခါ မျက်နှာဝင်းပသွား၍ မျက်လုံးများအသက်ဝင် လာမည်ကိုတွေ့ရမည်။ ထို့အတူ မည်မျှများပြားသောလူအုပ်ပင် ဖြစ်စေ လှမ်းကြည့်တာနှင့် ချစ်သူကိုသာတန်းတွေ့မည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ချစ်သူသည် သူတကာထက် ချောမောလှပထင်းနေ၍ မဟုတ်။ မိမိနေ့စဉ်ပို့သော မေတ္တာများကို ပြန်တွေ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအဆန်းအလှများကို တွေ့သောအခါ ချစ်သူကို ပေးချင်သော စေတနာသည်ဖြစ်၏။ စားကောင်းသောက်ဖွယ်များစားရသောအခါ ချစ်သူကို ကျွေးချင်သော စေတနာဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်လက်ဆောင်ပေးသည်ကို ပိုးကြေးပန်းကြေးဟုအမည်တပ်ကြသည်။ အမှန်မှာ အကျိူးလို၍ ညောင်ရေသွန်းခြင်းမဟုတ်၊ သည်ယုန်မြင်၍ သည်ချုံထွင်ခြင်းမဟုတ်၊ ထောင်မြင်၍ ရာစွန့်ခြင်းမဟုတ် ဘာကိုမှမမျှော်ကိုးဘဲ သူစိတ်ချမ်းသာရန် သူပျော်ရွှင်ရန်ဟူသော အဖြူရောင်စိတ်စေတနာပင်ဖြစ်သည်။ သေလုဆဲဖြစ်နေသောလူစိမ်းတစ်ယောက်ထက် နှာစေးနေသောချစ်သူကို ပိုမိုဂရုစိုက် ပိုမိုသနားမည်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကားကရုဏာ။
အရမ်းချစ်နေမိသောအချိန်တွင် သဘာဝလွန်ကိစ္စများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဥပမာ ရနံ့။ အချစ်၌ ရနံ့ရှိပါသည်။ ထိုရနံ့သည် ပေါ်လာခဲ၏။ အချစ်၏ရနံ့ဆိုစေကာမူ ချစ်သူနှင့်တွေ့တာပင်ပေါ်မလာတတ်ဘဲ ချစ်သူကြောင့် စိတ်အလွန်အမင်း ညွတ်နူးလှုပ်ရှားသောအချိန်မှာပေါ်လာတတ်သည်။ ရနံ့မှာ မွှေးသည်ဟူ၍လည်းမဆိုသာ စူးစူးရှရှလည်း မဟုတ် အလွန်အမင်း ယစ်မူးသာယာဖွယ်လည်းမဟုတ်။ အသင့်အတင့် ချိုအီမွှေးပျံ့ယစ်မူးဖွယ်ဖြစ်၍ အလွန်ဆုံ3းစက္ကန့်လောက်သာ ရှုရှိုက်ခွင့်ရလေသည်။ ချစ်သူမျက်နှာကို ကြည့်၍ အချစ်၏ရနံ့ကို ရှုရှိုက်ရင်း ရင်တလှပ်လှပ်ခုန်ကာ လက်ဖြင့်လှုပ်ခြင်းခံရသော ရေဘူးထဲမှသဲများကဲ့သို့ ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံး ထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ကာ ရင်ခုန်မူးယစ်ရသောအရသာမှာ “အော် ထို့ကြောင့်ဤအရာကိုအချစ်ဟုခေါ်သည်” ဟုရေရွတ်မြည်တမ်းရလောက်လေသည်။ ထိုအတူမိမိချစ်သူ အနားမှာရှိသောအခါ မမြင်ရပါဘဲလျက် အလိုလိုသိနေခြင်း၊ ဘာမှမမေးဘဲ ချစ်သူမျက်နှာကြည့်ယုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးတွန့်ရင်ဘာ မျက်ခုံးလေးချီရင်ဘာ မျက်နှာမှာဘယ်အရိပ်ပြေးရင်ဘာ ဘာအရောင်လေးသမ်းနေရင်ဘာ စသဖြင့်သိသော sixth sense ကိုပါရနိုင်လေသည်။
သူငယ်ချင်းအဆင့်မှ ချစ်သူအဆင့်သို့တက်ရာ၌ ခက်ခဲသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အရမ်းခင်မင်ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းများကို ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား မိန်းမယောက်ျားဟူ၍ မထင်မှတ်တော့ဘဲ ချစ်သူအဖြစ်ခံစား၍ မရတော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချစ်တယ်ဟုပြောလိုက်လျှင်လည်း နင်ကငါကိုဒီလိုမရိုးသားစရာလား ဟုပင်ရန်တွေ့တတ်သည်။ လူတစ်ဦးက လူတစ်ဦးကိုချစ်သည်ဆိုသည်မှာအလွန်မင်္ဂလာရှိသောကိစ္စဖြစ်ပြီး အချစ်သည်မရိုးသားမှုဟု ကင်ပွန်းတပ်ခံရလောက်အောင် သိမ်ဖျင်းသည့်အရာမဟုတ်ပေ။
ရောမခေတ်က ယောက်ျားပီသ၍ ရဲရင့်လှသည်ဟုနာမည်ကြီးသော တိုက်တိုင်းအောင် စစ်သူကြီးတစ်ယောက်သည် သူ့ကြင်ယာရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွား၍ ၀မ်းနည်းမှုကိုဖော်ပြသည့်အနေဖြင့် မိန်းမအ၀တ်အစားဖြင့်သာနေထိုင်သွားသည်မှာ သေသည်အထိဖြစ်သည်။ ကဗျာဆရာတစ်ဦး၏ဖြစ်အင်ကိုလည်း ရှုလိုက်ပါဦး။ ထိုသူသည် သူ့ချစ်သူကိုစချစ်သည့်နေ့ကတည်းက တစ်နေ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ရေးစပ်၍ ပေး၏။ အလုပ်ဘယ်လောက်များများ ဘယ်လောက်နေမကောင်းဖြစ်ဖြစ် ပျက်ကွက်ဖူးသည်ဟူ၍ မရှိပေ။ အိမ်ထောင်သက် 32နှစ်လုံးလုံး ကဗျာပေါင်းသောင်းနှင့်ချီ၍ သူ့မိန်းမ၏အလှကိုဖော်ကျူးသော သူ့အချစ်ကို ဖော်ကျူးသောကဗျာများကို သီကုံးခဲ့လေသည်။ ဇနီးသည်ကွယ်လွန်သွားသော်လည်း ကဗျာရေးခြင်းကိုမရပ်။ တစ်နေ့တစ်ပုဒ်ပုံမှန်ရေး၍ ဇနီးသည် အုတ်ဂူသို့သွားရောက် ပို့ဆောင်သည်မှာ သူသေဆုံးသည်ထိ 8နှစ်ကျော်ကြာသည်ဟူ၍။ ထိုသူများကားအချစ်၏ အင်အားမည်မျှလောက်နက်ရှိုင်းကြီးမားသည်ကို သက်သေပြသွားသူများပင်ဖြစ်သည်။ (အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများမှာ စာလှအောင်လုပ်ကြံဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ တစ်ကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်များဖြစ်ပါသည်)
အချစ်ကို ပိုင်စိုးသော နတ်သမီးမှာ မြားနတ်မောင်၏မိခင် ဗီးနပ်စ်(အပရိုဒိုက်)(အလှနှင့် အချစ်တို့၏နတ်သမီး)ဟုမှတ်သားဖူးသော်လည်း အချို့စာပေများ၌မူ လေနတ်သား၏မိခင် သောကြာနေ့၏ အရှင်သခင် ဖရစ်ဂျာနတ်သမီးပိုင်စိုးသည်ဟု ဖော်ပြချက်ပါရှိသည်။ (Friday-frigga’s day…..ဤကားစာကြွင်း)
ချစ်သူများနေ့ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းအရာနှင့် အဘယ်ကြောင့်valentine day ဟုခေါ်ကြောင်းကိုမူ လူသိများသောအကြောင်းအရာဖြစ်၍ စာမျက်နှာကိုငဲ့ကာ ချန်လှပ်လိုက်သည်။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လိုက်မည်ဆိုလျှင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းနှစ်ခု ရှိပါသည်။ပထမစည်းကမ်း……………အရှက်ကိုပယ်ပါ၊ ဒုတိယစည်းကမ်း……………….ပထမစည်းကမ်းကိုလိုက်နာပါ။
သူ ကိုယ့်ကိုချစ်နေလား မချစ်နေလား။
လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားမည်ဟုထင်ပါသည်။ ပညာရှင်များ၏အလိုအရ လူတစ်ယောက်သည် သူချစ်သည့်လူတစ်ယောက်နှင့် စကားပြောသည့်အခါ မျက်စိသူငယ်အိမ်သည် ကျယ်နေတတ်၍ မျက်တောင်လည်းသာမာန်ထက်ပို၍ ခတ်လေ့ရှိ၏။ သူ၏ခြေလက်များသည် သူချစ်သည့်လူဆီသာ ဦးတည်ထားတတ်သည်။ သာမာန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်စကားပြောလျှင် မျက်လုံးချင်းကြည့်၍ ပြောလေ့ရှိသော်လည်း လူတစ်ယောက်သည်သူစကားပြောနေသူကိုချစ်နေပါက ထိုသူ၏ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တစ်ဝိုက်ကိုပါ ကြည့်နေတတ်လေသည်။ ထိုအပြင် မျက်နှာ၏ အကြည်ဓာတ်၊ မိမိအပေါ်ဂရုစိုက်မှု၊ မျက်ဝန်းများမှတစ်ဆင့်လည်း အကဲခတ်နိုင်သည်။`
ကိုယ့်ချစ်သည့်လူနှင့်မတွေ့တာ ကြာလျှင် လွမ်းသည်မှာဓမ္မတာပင်ဖြစ်သည်။ သတိရခြင်းနှင့် လွမ်းခြင်းမှာ အခြေခံအားဖြင့် တူသော်လည်း အလွမ်း၌ နာကျင်ခြင်းပါ အစစ်ပါလေသည်။ ထိုကြောင့်ကိုယ်ချစ်ရသူ၏ အနီးအနားမှာနေခွင့်ရသူသည် ကံကောင်း၏။ ထို့ထက် ကိုယ်ချစ်ရသူက ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်ခြင်းခံရသူသည် ကံကောင်း၏။ အချစ်သည် ပထမမဟုတ်သော်လည်း ဘ၀၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်၏။ အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားပါ။ အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားသူသည် ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူ၏ အချစ်ကိုရလိမ့်မည်။ ချစ်သူသည် အားငယ်သောအချိန်၌ အားပေးဖေးမသူ၊ ဒုက္ခများဝမ်းနည်းမှုများကို မျှဝေခံစားပေးသူ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်အချိန်များကို ဖန်ဆင်းပေးမှု အထူးသဖြင့် ကိုယ်သိပ်ချစ်ရသူဖြစ်သောကြောင့် သူအတွက် အခမ်းနားဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သော သူမတောင်းဘဲပေးမည့်သစ္စာတရားဖြင့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သင့်ပေသည်။
In: ဝတ္ထု Posted By: niaallin Date: Nov 21, 2013
Leave comment2Comments & 1,076 views
အချစ်ကိုတန်ဖိုးထားသူသည် ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူ၏ အချစ်ကိုရလိမ့်မည်။ ချစ်သူသည် အားငယ်သောအချိန်၌ အားပေးဖေးမသူ၊ ဒုက္ခများဝမ်းနည်းမှုများကို မျှဝေခံစားပေးသူ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်အချိန်များကို ဖန်ဆင်းပေးမှု အထူးသဖြင့် ကိုယ်သိပ်ချစ်ရသူဖြစ်သောကြောင့် သူအတွက် အခမ်းနားဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်သော သူမတောင်းဘဲပေးမည့်သစ္စာတရားဖြင့် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သင့်ပေသည်။
By: TT at Nov 21, 2013
“သစ္စာမပျက် ချစ်စိတ်မှန်စေ ထားလေတန်ဖိုး မျှဝေဒုက္ခကြင်နာယုယ ၀တ်ငါးဝ ကျင့်လေချစ်သူတာ”
By: Violet.Violet at Nov 22, 2013